Sh C/Qaadir Mu’min oo xalay Muxaadaro aad u qiimo badan oo ciwaankeedu ahaa (QALADAAD KU JIRA CAQIIDADA) ka soo jeediyey Masjidka Arraxmah ee ku yaala Magaalada Birmingham UK. | Halganka Online
December 2010 October 2010 August 2010 July 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 October 2009 September 2009 August 2009 Wararkii Ugu Danbeeye
Beenaale Daahir Calasaw (waagacusub.com) oo daadku qaadey kadib markii uu daan daansaday warbaahinta xortaa ee xaqiiqada tatbisa. War Deg Deg ah: Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin oo Jihooyin kala gedisan kasoo galay magaalada Dhoobleey iyo Gaadiid ay ka carareen Maleeshiyadii Axmed Madoobe oo laga heley Howdka Dhoobleey. SomaliMeMo oo heshay shax Milateri oo ay dejisay AMISOM si ay ugu qabsato magaalada Muqdisho iyo ciidamo taabacsan DKMG-ka oo si qarsoodi ah ku jooga deegaanada ay Mujaahidiintu ka maamulaan magaalada Muqdisho.(Warbixin dheer oo Xasaasi ah).	Mu'assasada Al-Kataaib oo soo saartay filim cusub oo heer sare ah kana waramaya dagaalladii ugu dambeeyay Muqdisho. Amiirka Mujaahidiinta Al-shabaab Sh.Mukhtaar Abu-Zubayr Allaah Dhowree oo ka hadley Somaliland.	Jamaacada Ictisaam iyo Jalaafaynta Jihaadka.(Tariikhda Madaw ee Ictisaam). Sheikh Cumar Faaruuq Shalay Iyo Maantay Iyo C/laahi Yusuf Iyo Sheikh Sharif (Dhagayso)	Amiirka Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa fariin soo diray oo kaga hadlaayo qaraxyadii barakaysnaa ee ka dhacay magaalada kampala ee dalka uganda.(DHAGAYSO)	Sh.Usama”Cadaalada ka mid ma’ahan in Ameerikaanku ku Noolaadaan Baraare iyada oo ay Walaalaheena Gaza ku jiraan Nolol Rafaad badan”.	Xarakatu shabaabul mujaahidiin oo faahfaahisay camaliyadii Istish-haadiga ee Lagu Halaagay Saliibiyiinta AMISOM (DAAWO SAWIRADA)	Sh C/Qaadir Mu’min oo xalay Muxaadaro aad u qiimo badan oo ciwaankeedu ahaa (QALADAAD KU JIRA CAQIIDADA) ka soo jeediyey Masjidka Arraxmah ee ku yaala Magaalada Birmingham UK.
Posted on December 28, 2009 by halganka	Sh C/Qaadir Mu’min Oo Ka Mid Culimada Soomaaliyeed Oo Qurbaha Ku Nool Xaqa Ku Taageera Geesiyaasha Mujaahidiinta Soomaaliyeed ayaa xalay Muxaadaro aad u qiimo badan oo ciwaankeedu yahay (QALADAAD KU JIRA CAQIIDADA) ka soo jeediyey Masjidka Arraxmah ee ku yaala Magaalada Birmingham UK.
Sh C/qaadir Mu’min Allaah ha dhowree oo ka mid ah culumada caanka ka ah wadamada Yurub iyo gudaha dalka Soomaaliya ayaa xalay waxa uu Muxaadaro aad u qiimo badan oo taabanaysay Jawaanib kala gadisan oo ku saabsan caqiidada Islaamka ka soo jeediyey Masjidka Arraxmah ee ku yaala magaalada Birmingham Caasimada labaad ee dalka Ingriiska.
Muxaadaradaan oo Ciwaankeedu ahaa Khaladaad ku jira Caqiidada ayuu shiikhu ku qaadaa dhigay khaladaad badan oo ku jira caqiidada qaar ka mid ah Shacabka Soomaaliyeed asaga oo shiikhu muxaadaradaas ku soo bandhigay Usluub degan oo dadkii dhagaysanayey ay aad ugu ula dhacsanaayeen dhageysiga Muxaadarada.
Shiikha ayaa Muxaadaradiisa kaga hadlay arimo kala gadisan oo ay ugu badnayd arimaha haatan ka taagan gudaha dalka Soomaaliya asaga oo shiikhu si geesinimo ah u cadeeyey Mowqifkiisa ku aadan kooxo badan oo ku sugan dalka Soomaaliya.
Shiikha ayaa waxa uu Muxaadaradiisa u soo bandhigay si cilmiyeysan waxana uu si aad ah u badiyey Aqwaasha Ahlul Cilmiga asaga oo shiikhu mas’ala walbaa oo uu Ta’siilinayana ku dhisay Adilada Sharciga ee ay ugu horaysay Kitaabka iyo Sunada waxana uu shiikhu sheegay sababta uu u badinayo soo raritaanka Aqwaasha Culumada Salafka ahi in ay tahay si ay Muxaadaradiisu u noqoto mid Cilmiyeysan ee aysan hadaladiisu u ahaan mid shakhsi.
Shiikhu waxa uu ka hadlay Mawaadiic kala gadisan waxana aynu ku soo koobaynaa arimahaan.
Shiikhu waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay tahay Dowlad Riddo ah waxana uu xusay in Baarlamaankeedu uu yahay Baarlamaan Riddo.
Shiikha ayaa sheegay Gaal iyo Gaalo raacba in ay isku xukun yihiin.
Kooxaha gacan saarka la leh Tigreega ee ku sugan Doolow iyo Feer feer ee ay Tigreegu dabada ka soo wado ayuu shiikhu sheegay in ay ku dhecen wax burinaya diintooda sidaas daraadeedna ay lagama maarmaan tahay in ay ka toobad keeneen arinkaas.
Waxa kale oo shiikhu aad u soo naqliyey adilo badan oo ay gaaloobeen kuwa sheeganaya dowladdu.
KUWA SHEEGTAY IN AY YIHIIN CULIMO SALAFIYIIN AH.
Shiikha ayaa sheegay in ay jiraan rag sheeganaya in ay yihiin culimo Salafiyiin ah oo markii hore u arki jiray Baarlamaanka in la galo in ay Gaalnimo tahay in ay maanta ayaga oo Cimaamadahoodii wata ay dhex fadhiyaan baarlamaanka Ridada.Shiikha ayaa sheegay Qaar ka mid ah kuwaas aan kor ku soo sheegnay in ay mararka qaarkood ku hadlaan hadalada ay ku hadlaan Cilmaaniyiinta iyo hadalo ka sii xunba.
Shiikha ayaa sheegay in qaar ka mid ah kuwaas sheegtay in ay yihiin culimo waaweyn oo salafiyiin ah in ay yiraahdeen “ Sujuuda ayaan ku habaarnaa tigreega iyo kuwa Islaamiyiinta ah ee kula dagaalamaya Soomaaliya Labadaba”.
Shiikha ayaa sheegay in kooxdani ay umada ku wadaan jid khaldan oo ay ku halaagsanto umaddu.
Waxa uu Shiikhu kooxdaan ku tilmaamay in ay aamin san yihiin Mabda’a irjaaga oo ay umadda ayagu halaageen ka dib markii ay u fatwoodeen in dambi kastaa oo ay sameeyaanba ay Muslimiin ahaanayaan hadaysan qalbiga ka xalaalaysan dambigaas waana middaasi midda ku kaliftay dadka qaarkiis in ay waxa ay doonaan walaaqaan maadaama ay Muslimiin sii ahaanayaan wax kasta oo ay sameeyaanba.
Waxa uu shiikhu aad uga digay Mabda’a Faasidka ah ee irjaaga.
Shiikhu waxa uu kooxdaan ku sheegay in ay yihiin Mushrikiin Qubuura galeen ah waxana uu umadda ku booriyey in laga beri noqdo lalana dagaalamo maadaama aysan Muslimiin ahayn.
Shiikhu waxa uu sheegay in ay xaaraan tahay in kooxdaan loogu yeero Ahlu Sunnah waxana uu sheegay qofkii magacaas ugu yeera in uu la mid yahay qof ugu yeeray qof kale Gaal Muslim, Sidaas daraadeed waa in loogu yeeraa MUSHRIKIIN ayuu yiri Shiikhu.
Shiikha ayaa sheegay in kooxdani ay Bililiqaysteen Magaca Ahlu sunnah, waxana uu sheekhu sheegay in kooxdani ay umadda Soomaaliyeed ku soo tarbiyeyeen Jid halaaga ku waday hadii uu san Allaah ka soo gaarin waxana uu shiikhu si aad ah u radiyey dadka ku andacooda in kooxda Suufiyadu ay shacabka Soomaaliyeed diinta soo gaarsiiyeen waxna soo bareen.
Shiikha oo arinkaas ka hadlayana waxa uu yiri ” Kooxdana maxay na bareen? Waxa ay na bareen oo na soo gaarsiiyeen Shirki iyo khuraafaad Allaah ayaa naga soo gaaray, Diinta waxaa na soo gaarsiiyey saxaabadii iyo jidkooda kuwii qaaday ee kuwani shirki ayey na bareen”.
Shiikha ayaa sheegay in ay waayadaan dambe bilaabatay in Cilmaaniyiintii Soomaaliyeed ay taxaaluf la samaysteen kuwa sheeganaya culimo Soomaaliyeed isku hadafna ay noqdeen.
Shiikha ayaa sheegay in kaaxdani ay wado waxa loo yaqaano gobolaysi iyo kala qaybinta umada Muslimka ah, waxana uu shiikhu ku dheeraaday Ummadda Muslimku in ay tahay hal Ummad , Ajnabi in aan loogu yeeri Karin qof Muslim ah, waxaa ajnabi ah qofka gaalka ah haba ahaado Soomaaliye.
Cilmaaniyiinta ayuu shiikhu aad uga digay waxana uu shiikhu Balaariyey khatarta ay Cilmaaniyiintu ku hayaan Mujtamaca Muslimka ah ee Soomaaliyeed.
Shiikhu waxa uu sheegay in Calanka Buluugani uu yahay daaquut ay waajib tahay in la Zuuliyo, waxana uu sheegay in calanka Rasmiga ahi uu yahay midka UU ku qoran tahay Tawxiidku, waxaa waajib ah in Barri laga noqdo oo laga Zuuliyo goobaha uu ka babanayo.
DAGAALKA LAGULA JIRO AMISOM.
Shiikha ayaa sheegay dadka qaarkiis oo weliba Culimo ay ugu horayso in ay yiraahdaan dagaalka waa in la joojiyaa oo aan AMISOM la weerarin, Shiikha ayaa si caro ka muuqata u yiri “ Dagaalka Lama joojinayo, Maxaa loo joojinayaa? Ma waxaa la gaaray Qaayadii Allaah noo sheegay ee ahayd inta laga waayayo Fitnah iyo shirki ,, Miyaa La waayey Fitnadii miyeyse AMISOM ka baxeen Dalka Soomaaliya?”.
XUDUUDAHA LA OOFIYO.
Shiikhu waxa uu si kulul ugu jawaabay dadka diidan in aanan la oogin wax xuduud ah , asaga oo arinkas si cilmiyeysan uga hadlay soona naqliyey xiliyo umaddu ku sugnayd xaalada hadda ay ku sugan tahay mid la mid ah oo ay kooxo Muslimiin ahina ay oofinayeen xuduudaas.
Waxa uu shiikhu si kulul u yiri “ dadka diidan in xuduuda la oogo maxay uga hadli waayeen labada maamul ee Land Land ee maalin walbaa umada xira,dila oo dhaca kuwaasi ma imam ayey haystaan maxaase culimadu kuwaas uga qaylin la’yihiin”.
Shiikhu waxa uu amaan u soo jeediyey Mujaahidiinta Soomaaliyeed ee difaacaya Diinta iyo Dalka ee herdanka kula jira AMISOM iyo kooxda garabkeeda taagan, waxana uu shiikhu sheegay in kooxdaasi ay ummadda badbaadinayso Bacdallaah oo ay sharaf iyo karaamo u soo jiideen shacabka Soomaaliyeed.
Si kastaba ha ahaatee Muxaadaradaan oo socotay Laba saacadood iyo daqiiqado yar ayaa ahayd Muxaadaro aad loogu bogay waxana ay dadku aad u jeclaayeen in ay sii socoto Muxaadaradu maadaama ay cadaynayso Jahli iyo dulmi badan oo ka jira saaxada Soomaaliyeed.
Filed under: Uncategorized « Maamulka Somali Islamic Dacwatu Tawxiid Center Wuxuu Idinku Bishaareenayaa In Caawa Uu Qabanaayo Kulan Loogu Tala Galay Shacabka Soomaaliyeed Meel Walba ay Dunida ka Joogaan Iyo Websiteyada Soomaaliyeed Xukuumada Ridada Ee Murtad Shariif Oo Taageeray In Wadanka Lakala Qeebiyo Si Loo hoos Tago Xuukumada Mujrim Zanaawi »